जिम्मेवारी को बैंक लोड खाना स्टोर "शाखा" रूपमा प्रयोग गर्दा। व्यापार क्षतिपूर्ति प्राप्त बिना या त बढेको जोखिम वा लागत वृद्धि लागि angera बैंकर बाध्य। बैंक बैंक शाखा द्वारा आफूलाई सफाइ सुरक्षित तरिका हुनेछ। के तिनीहरूले उल्लेख छैन यो बैंकहरू आफूलाई बाहेक अरू सबैका लागि कम सुरक्षित छ भन्ने छ। अन्य कुनै कम्पनी रूपमा बैंकहरू रूपमा स्वार्थी छ। बैंक कार्यालय भन्डार भन्दा टाढा सुरक्षित छ। साथै, बैंक robberies कुल वेफर्स को केवल एक अंश constituted। 2011 देखि एक बयान बैंक robberies पसलहरूमा र बैंकहरुमा प्रतिबद्ध भएको robberies प्रतिशत मात्र बस पाँच लागि हिसाब कि देखाए। आजकल यो पनि व्यवहार मा यो बैंक डकैती प्रतिबद्ध गर्न असम्भव छ भन्ने रूपमा सुरक्षित नगद ह्यान्डलिङ बैंकहरू ह्यान्डल गर्ने नगद छ।
तथाकथित इका बैंक वास्तविक बैंक छैन, र कहिल्यै या त हुनेछ। Coop समकक्ष लागि नै जान्छ।
तिनीहरूले कुनै शाखा र "बैंक अवस्थामा" मात्र इन्टरनेट वा टेलिफोन गरेर खराब मामला मा गोली थिए छ। IKEA यसको आफ्नै तथाकथित बैंकिङ भए तापनि। दुवै ICA र IKEA पनि आफ्नै क्रेडिट कार्ड जारी। ठूलो स्वीडिश कम्पनीहरु को उदाहरण भुक्तानी प्रणाली भन्दा शक्ति प्राप्त। ग्राहकहरु कहिलेकाहीं लगभग उदाहरण, Formica काउन्टरहरू लागि, पर्याप्त नगद प्राप्त गर्न माग्छु छन्। यो कार्ड बिना पैसा प्राप्त गर्न पनि छ।
पहिलो मात्र Riksbank नगद व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार छ थियो। को 80s र 90 को दशक मा अन्य कुराहरु गभर्नर कार्यालय को समापन परिणाम जो rationalization र दक्षता (impairments पढ्नुहोस्) पछि लागे। केही वर्ष को लागि लाभकारी र लागत बचत ध्यान भनेर गतिविधिहरु एक कम्पनी अस्तित्व। यो स्वीडेन (PSAB) मा मुद्रा भनिन्थ्यो। कम्पनी एक वित्तीय fiasco भयो र 2004. तल बन्द भएको थियो त्यसपछि हालको deregulated सिस्टम आए। यो deregulated सिस्टम मा निर्णय भएको कार्यकारी बोर्ड यसको जरा छ। को Riksbank अब Tumba र Molndal दुई कार्यालय द्वारा चलाउन थियो जो आफ्नो अघिल्लो डाटा को केवल एक अंश थियो। यो Broby मा एक कार्यालय मात्र बैंकनोट्स ह्यान्डल गर्ने गर्न सञ्चालन सार्न 2013 मा निर्णय भएको थियो। पूर्ण सिक्का व्यवस्थापन निजी कम्पनी द्वारा चलाउन आए।
प्रदर्शनमा खातिर बैंक अनिवार्य कानुनी स्थितिको नगद दिन एक विकल्प छ दिन्छ। तर तपाईं स्पष्ट जो तरिका यो leans पाठ मा देख्न सक्नुहुन्छ। नगद वैधता सजिलै अपवाद, अनुबंध र सम्झौताहरू बाटो द्वारा निर्मूल गर्न सकिन्छ। यहाँ भुक्तानी बजार सुरक्षित राख्न गर्न Riksbank छ। समस्या बाहेक (प्रयोग गर्न) नगद "यति ठूलो हुनुपर्छ र त असर
बजार धेरै मानिसहरू deteriorates '(यो बारे केहि गर्न)।
Riksbank नै छ कि यो (नगद प्रयोग को मामला मा) उपभोक्ताहरु र कमजोर समूहहरूको लागि कुनै पनि सुरक्षा प्रदान गर्दैन ठाडै भन्छन्। यी समूहहरू पूर्ण तानाशाही बैंक द्वारा उपेक्षा गरिन्छ। उनीहरू त्यहाँ नगद भुक्तानी गर्न cashless विकल्प उपलब्ध छैन सक्षम हुन मात्र केही भन्न। पहिले विरोधाभासी दावी बावजुद त्यहाँ नगद राशि र छैन Riksbank नियन्त्रण गर्ने सार्वजनिक मांग छ कि। यसलाई तपाईं कसरी गर्न चाहनुहुन्छ?
केही व्यक्तिगत रुचि, को Riksbank गरेको मानसिकता लागि कुनै कोठा छ। यसलाई नगद प्रयोग गर्न बैंक खाता खोल्न सही छ नगर्ने बारे बढि छ। "लक्षित उपाय" देखि प्रस्तावित यी विरुद्ध। कागजात आत्मा नगद "पुरानो" छ भन्ने छ र समस्या सट्टा तार्किक cashless विकल्प तानाशाही छ बारे हुनुपर्छ गर्दा विकास slows।
केवल केहि समूह नगद प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनेर अन्तर्विरोध। यो Riksbank व्यावसायिक के निर्णय गर्नुपर्छ भनेर धेरै ज्यादा सबै छ। त्यसपछि मानिसहरू पालना। dictatorships मा जस्तै सिद्धान्त।
सायद प्रयोग नै विधि पनि राजनीतिमा? कर अघि 5,00,000 crowns भन्दा कमाउन जो कोहीले "डिक तानाशाह" को लागि मतदान गर्नुपर्छ। यो रकम भन्दा कमाउन गर्नेहरूलाई "sture प्रधानमन्त्री" को लागि मतदान गर्नुपर्छ। "डिक तानाशाह" अर्थव्यवस्था बिना खराब विकल्प सधैं छ। Kontantlöshet सधैं एक घटिया वैकल्पिक छ।
यसलाई नगद दुवै र खाता-आधारित (पढ्ने cashless) भुक्तानी मात्रा को अर्थव्यवस्था छ भनेर देखाउनुभयो छ। विशुद्ध आर्थिक मामलामा, त्यहाँ दावी गर्न कुनै आपत्ति छ। समुदायको धेरै वृद्धि राशि संग सस्ता हुँदैछ। समस्या दुखाइ बाधा गर्न नगद कम द्वारा मापन आफ्नो अर्थव्यवस्था हटाइएको छ। महंगा यस सन्दर्भमा अन्याय हो कि नगद कुरा। यो आधा नगद भएको थियो, आधा cashless भुक्तानी उचित तुलना गरेका छन् सक्छ थियो।
समझदार SEK 1000 सट्टा 995 मा उत्पादन त यो अब त महत्त्वपूर्ण oerhärt सेकेन्ड मा धेरै समय बचाउँछ। ठूलो रकम थप बिल गणना गर्न रूपमा पाठ्यक्रम कुरा पाठ्यक्रम छ नगद मा भुक्तानी गर्न लामो समय लाग्छ। सम्झौता सानो रकम हुनेछ जब यो राम्रो छ।
तपाईं माथि उल्लिखित दोस्रो द्वारा के मतलब? पूर्ण कैशियर तल हतार? सही गति मा काम गर्ने काउन्टरहरू मा कर्मचारी गरौं र मृत्यु छैन हतार। सेकेन्ड कुरा रोक्नुहोस्। नगद भुक्तानी स्ट्रिमलाइन गर्न वर्दी मूल्यहरु सेट गर्न प्रस्ताव रूपमा क्रान्तिकारी रूपमा सरल छ। एक दूध दस crowns समान रूप र 9.90 खर्च हुनेछ। हेडफोन एक जोडी समान रूप र 295. 300 खर्च हुनेछ बेफाइदा आघात को वाणिज्य मर केही wretches यस्तो कट्टरपंथी परिवर्तन पनि बोल्ड हुन सक्छ जब कि राम्रो छ। को व्यंग्यात्मक टोन पाठ मा स्पष्ट थियो आशा। सायद नगद भुक्तानी भर्खरै कारण लागि cashless धेरै सेकेन्ड पिटे गर्दा।
त्यसपछि, कागज मा कथित उच्च हदसम्म प्रयोग नगद छ। थ्रेसहोल्ड र समय एक गणितीय ग्राफ द्वारा ब्याक मा taut लेखन मार्फत यस मामला छ कि "साबित"। यो लागत यसलाई भुक्तानी गर्न लिन्छ समय द्वारा पूर्ण कटिबद्ध छ भन्न रूपमा हालसम्म जान्छ। को गणना यति मेहनत को असाधारण वा अर्ध-धार्मिक मा सीमाना आकर्षित छन्। एक सिद्ध नगद भुक्तानी सस्ता छन् कि सुरक्षा उद्योग बारेमा पर्याप्त रेभ गर्न सक्दैन। तर मन खेल Riksbank गरेको सही भन्न गरौं। कि यो क्रेडिट कार्ड द्वारा भुक्तानी गर्न एक निश्चित मूल्य भन्दा सस्ता छ।